“Waa guuldaro weyn ee u soo hooyadatay kubadda cagta, laakiin taariikhda lama tirtiri karo” – Gool FM
“Waa guuldaro weyn ee u soo hooyadatay kubadda cagta, laakiin taariikhda lama tirtiri karo”
(Premier League) 16 Jan 2019. Macalinkii hore kooxaha Chelsea iyo Manchester United ee Jose Mourinho ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in isaga uu sabab buuxda u ahaa bilaabashadiisii ugu horseysay Petr Cech ee horyaalka Premier League.
Petr Cech ayaa shalay ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono kubbada cagta marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, kadib mudo dhan 20 sano uu ku soo dhex jiray.
36 jirkan ayaa yimid galbeedka magaalada London sanadii 2004-kii, kadib markii uu kaga soo biiray kooxda Rennes, waxaana xiligaas lasoo saxiixday Claudio Ranieri oo ahaa malinka kooxda Chelsea, kahor inta uusan imaanin Jose Mourinho.
Petr Cech ayaa yimid England isagoo noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu da’ada yar kubada cagta ee caalamka, wuxuuna kulankiisii ugu horeeyay ee Chelsea ka caawiyay in 1-0 ay kaga adkaato Manchester United bishii August sanadii 2004.
Hadaba Jose Mourinho ayaa wareysi uu bixiyay kadib markii uu Petr Cech shalay ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono kubbada cagta dhamaadka xili ciyaareedkan wuxuu ku sheegay:
“Sharaf ayay ii tahay inaan noqdo tababarahii ugu horeeyay ee fursad u siiya Petr Cech in isaga oo da’ayar ah uu u xirto No. 1-aad, koox weyn ee horyaalka Premier League ah”.
“Maalintaas kadib, wuxuu sameeyay wax walba, ee ku aadan rikoodhada xirfadiisa kubada cagta, sida tirada inta jeer shabaqiisa oo nadiif ah uu ilaashaday iyo sidoo kale koobabkii uu ku guuleystay xirfadiisa kubada cagta”.
“Waa guuldaro weyn ee u soo hooyadatay kubada cagta, laakiin taariikhda lama tirtiri karo, waxaa si weyn ugu hambalyeenayaa, xirfadiisan cajiibka ah ee kubada cagta”.